ब्रा नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा हिँडेको भन्दै फ्यानहरुले अभिनेत्री मलाइकामाथि गरे अभद्र टिप्पणी – 24updatemedia
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोराको बेला–बेलामा चर्चामा रहने गर्छिन् । आफ्ना तस्बिर र बयानका कारण उनी चर्चामा रहने गरेकी छिन् । हालै, मलाइका आफ्नो कुकुरसँग घुम्न बाहिर गएकी थिइन् । उनले स्वेट शर्ट लगाएकी थिइन् । स्वेटसर्टबाट मलाइकाको लाजका गहना निस्किएको देखेर मलाइकाले ब्रा लगाएकी छैनन् भन्ने कुरा आम दर्शकलाई थाहा भयो ।
त्यसपछि के थियो, टिप्पणीहरूको वर्षा सुरु भयो । ब्रा नलगाएको भन्दै मलाइकामाथि अभद्र टिप्पणी गरिएको थियो । एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘म्याडम हतारमा हुनुहुन्थ्यो त्यसैले भित्री भेस्ट लगाउन बिर्सनुभयो ।’ अर्को एकजनाले लेखे, ‘यो असहज होइन र ? उनले किन ब्रा नलगाएको हो ?’ यति सस्तो यार भन्दै अर्को एकजना लेख्छन्, ‘उनले कहिल्यै पूरा कपडा लगाउँदिनन् र अहिले उनले भित्री लुगा लगाएको छैन, त्यसैले उनका नि’प्प’लहरू देखा पर्दैछन् ।’
तर, मलाइकाको समर्थनमा धेरै मानिसहरु पनि देखिएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूले मलाइकाको शरीर छ र के लगाउने र के लगाउने भन्ने उनको रोजाइ रहेको बताए । एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘हरेक महिलासँग यो हुन्छ, हरेक पुरुषसँग पनि हुन्छ । हामीले हाम्रो सोचको स्तर माथि उठाउनुपर्छ । यो मानव शरीरको एक अंग हो । यसमा छलफल गर्नुको औचित्य के हो ?’ अर्का प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘किन सबैजना मलाइकाको ब्रा पछाडि छन् ? यो पूर्णतया उसमा भर पर्छ कि उनले के लगाउन चाहन्छन् र के गर्दैनन्।
यसलाई ठूलो कुरा नबनाउनुहोस् । खासगरी केटीहरुले कमेन्ट गरिरहेका छन् । केटीहरूले कम्तिमा यो बुझ्नुपर्छ किनभने उनीहरूलाई थाहा छ यो ब्रा लगाउनु कस्तो हुन्छ ।’ स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै एकजना लेख्छन्, ‘यो तिनीहरूको स्वतन्त्रता, तिनीहरूको छनौट, तिनीहरूको शरीर र तिनीहरूको मूड हो । र सबै कुरा उसको इच्छा अनुसार हुनुपर्छ । उनी आफ्नो हरेक अंगको मालिक हुन् । तिनीहरूलाई तिनीहरू जस्तै हुन दिनुहोस् ।’
Previous ‘बले’को टिममा नयाँ ट्विनी गर्ल्स
Next पढ्न नपाएपछि ९ वर्षकी बालिकाले देश छोडिन्, विदेशमा गएर पोर्नस्टार बनिन्